Durak-Bucak စခန်းများအကြားမြေပြိုတောင်ပြိုမှု RayHaber
[28 / 10 / 2019] ဒေသတွင်းအတွက်မဟုတ်ဘဲတိုင်းပြည်အတွက်Самсунဆပ်ရထားလမ်း	29 Gumushane
[28 / 10 / 2019] TCDD ပို့ဆောင်ရေးသည် 4.R & D နှင့် Innovation Summit တွင် its ည့်သည်များကို visitors ည့်ခံခဲ့သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[28 / 10 / 2019] Izmir Usak ရထားချိန်နှင့် 2019 ကိုမြေပုံပါ	35 Izmir
[28 / 10 / 2019] သမ္မတနိုင်ငံ၏ 96 ခေတ်ကိုကာဒိုက်မြို့၌စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူကျင်းပမည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[27 / 10 / 2019] ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးရထားပေါ်တွင်ဒင်္ဂါးပြားနှင့်လှုပ်ပါ	86 တရုတ်
[27 / 10 / 2019] Izmir ရထားနာရီနှင့်မြေပုံ 2019	35 Izmir
[27 / 10 / 2019] Izmir Denizli ရထားနာရီနှင့်မြေပုံ 2019	20 Denizli
[27 / 10 / 2019] Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်၏ကုန်ကျစရိတ် 75 ဘီလီယံ TL	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[27 / 10 / 2019] 39 City ဆက်သွယ်ထားသောတရုတ်မီးရထားကွန်ယက်သည် 5,8 ကီလိုမီတာတစ်ထောင်ကျော်သွားသည်	86 တရုတ်
[27 / 10 / 2019] ၀ န်ကြီး Turhan: Burdur တွင်ခရီးသည် ဦး ရေတိုးလာလျှင်	15 Burdur
Durm-bucak Km 321 + 000-321 + 150 အကြား Ist Landscaping ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတင်ဒါရလဒ်
TC ပြည်နယ်မီးရထားလုပ်ငန်း TCDD Adana6။ ဒေသတွင်းညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (TCDD) 2019 / 432121 GCC ကန့်သတ်ထားသောတန်ဖိုး 2.058.703,00 TL နှင့်တင်ဒါတင်ဒါအကြား Km 3.170.890,00 + 321-000 + 321 အကြားရှုခင်းများအကြား Landscaping ကြားတွင်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန။ NUH MERT သည် 150 TL လေလံကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ တင်ဒါတွင်ပါ ၀ င်သော 60 ကုမ္ပဏီကကန့်သတ်ချက်ထက်လျော့နည်းသောလေလံကိုတင်ခဲ့သည်။
တင်ဒါတွင်တည်နေရာတွင်စုပုံနေသော 1296 မီတာØ 120 စင်တီမီတာအချင်းဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ အလုပ်၏ကြာချိန်သည်နေရာမှပို့သည့်ရက်မှ 120 (တစ်ရာနှစ်ဆယ်) ရက်ဖြစ်သည်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စခန်းများခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်ပွုပွငျလုပ်ငန်းခွင်စခန်းများကြားမှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအဆိုပါမြေပြိုမှု 10 / 09 / 2019 TCDD ADANA6Durak Bucak ဘူတာများအကြားတွင်မြေပြိုတောင်ပြိုမှုတိုးတက်ခြင်း။ KN 321 + 000-321 + 150 မြေပြိုခြင်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအကြားတွင်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေပုဒ်မအရဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုတင်ဒါခေါ်ယူမည့်ညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန Durak-Bucak ။ တင်ဒါနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုခ) လိပ်စာ - Kurtulus Mahallesi Atatürk Caddesi 4734 Seyhan SEYHAN / ADANA (ဂ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ် - 19 - 2019 ç) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများကိုတွေ့နိုင်သည့်နေရာ…
Hatt inbred စီးပွားရေးလေလံရလဒ်နှင့်အတူ Piling ဒေသတွင်း၌ Sirkeci-Uzunköprüအပြတ်အသတ် 03 / 05 / 2018 Sirkeci-Uzunköprüလိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: Sirkeci-Uzunköprüလိုင်းမိုင်အကွာအဝေးနှုန်း 271 အကြောင်းကိုကုန်ကျထားတဲ့တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး / 000 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 271 TL ၏စီးပွားရေးတင်ဒါရလဒ်၏ 200 မှ inbred နှင့်အတူ 2018 + 165422-3.488.489,23 + 4.771.919,72 လက်ဝါးကပ်တိုင်အပြတ်အသတ်ဧရိယာရဲ့လိပ်ခေါင်း: 271 အဆိုပါစီးပွားရေးတိုးတက်မှု 000 နှင့်အတူအင်တာမီလန်-271 200 85 + Piling အပြတ်အသတ်ဒေသတစ်ခုတည်းသောလေလံဖြစ်နုနှင့်£ 3.509.150,60 ကရင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများများ၏လေလံနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ AND TRADE CO, LTD ကုမ္ပဏီရရှိထားပြီးပါပြီ။ နုလေလံပါဝင်5ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတင်ဒါကလောင်အလုပ်လုပ်တယ်အခြေခံအဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ပျင်းလိပ်ခေါင်း၏ 4.5587ကုဗမီတာကိုဖုံးလွှမ်း။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေးပို့ထံမှကြာချိန် ...
Bursa - Yenisehir မြန်နှုန်းရထားအခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေး T3 - နုကမ်းလှမ်းမှုကို၏ T4 ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကတော့အပြတ်အသတ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးထံမှကောက်ယူခဲ့သည် 15 / 01 / 2015 TCDD T3 - အထွေထွေညွှန်ကြားမှုဖြင့်ကျင်းပလိမ့်မည်သည့်မြေပြိုတာကနိုင်ငံတော်မီးရထား (TCDD) တားဆီးဖို့တင်ဒါအတွက်စုဆောင်းလေလံအကြား T4 ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, နူးညံ့သောလေလံ "- - Yenisehir မြန်နှုန်းရထားအခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေး T3 Bursa အပြတ်အသတ်၏ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့ (ဘီစီ-CD-ဝင်ရိုး မှလွဲ. ) ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအကြား T4" 07 ဇန်နဝါရီလ 2015 ရက်ပေါင်းစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, 16.614.099,23 အောက်ပါအတိုင်း£ 1 ကုမ္ပဏီများနှင့်လေလံအကြောင်းကိုသတ်မှတ်ထားသောကုန်ကျစရိတ်များအဖြစ်တင်ဒါ (TL) တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်။ အာရှမီးရထားရထား - ဖွဲ့စည်းပုံBesataş 8.589.0742။ ဘိုးဘေးတို့ဆောက်လုပ်ရေး 8.872.1703။ Karyol ဆောက်လုပ်ရေး 8.880.7074။ self-ကျွန်းဆောက်လုပ်ရေး 8.964.5755။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းဆောက်လုပ်ရေး 9.167.2046... ။
Bursa - Yenisehir မြန်နှုန်းရထားအခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေး T3 - မြေပြိုမှုတင်ဒါ၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး T4 အကြားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရလဒ် 15 / 10 / 2015 TCDD T3 - ထိုမြေပြိုမှု၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလေလံပွဲအကြား T4 ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတူရကီပြည်နယ်မီးရထားရလဒ် (TCDD) စုဆောင်း 07 ဇန်နဝါရီလ 2015 တစ်ရက်ဟာယယဇ်ပူဇော်သဖြင့် "Bursa - Yenisehir မြန်နှုန်းရထားအခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေး T3 - ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအကြား T4 (သောရိုး မှလွဲ. ဘီစီ-CD ကို) မြေပြိုမှုတားဆီးဖို့" တင်ဒါအပြီးသတ်ခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, 16.614.099 နှုန်းအဆိုပါအနီးစပ်ဆုံးကုန်ကျစရိတ် Budakyol ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက် TL အပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်နဲ့အောက်တိုဘာလ 02 2015 8.964.575 ပေါ်တွင်တင်ဒါအနိုင်ရဆုံးဖြတ်သည်။ ကိုးကားစရာ: ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 1215 / 12 2015 ဇန်နဝါရီလ (EE)
တူရကီ - အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအဆင့်216 ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း - 17-စီမံကိန်းများအကြားလျှောစောက်အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောမြေပြိုမှု၏ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလေ့လာမှု, အင်ဂျင်နီယာန်ဆောင်မှုကန်ထရိုက်ကုမ္ပဏီတင်ဒါအနိုင်ရနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး 26 / 10 / 2013 TCDD တူရကီ - အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း2အဆင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း 16 - ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း 17-စီမံကိန်းများအကြားလျှောစောက်အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောမြေပြိုမှု၏လေ့လာမှု, အင်ဂျင်နီယာန်ဆောင်မှုစာချုပ် Yuksel စီမံကိန်းကုမ္ပဏီနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး "ဟုအဆိုပါညွှန်ကြားမှုအထွေထွေခြင်းဖြင့်ညှိနှိုင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မည်သည့်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) အိမ်ခြံမြေများအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရ တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအဆင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း216 - ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမြေပြိုမှုအတွင်း 17 လက်ဝါးကပ်တိုင် Slope Own-Project မှလေ့လာရေးဖြစ်ပေါ်, အင်ဂျင်နီယာန်ဆောင်မှုများ "တင်ဒါရလဒ်သိရသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, နု 575.829,50 439.735 ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်. Yuksel ကုမ္ပဏီတစ်ခုကစီမံကိန်းများအတွက်လေလံအနိုင်ရအဖြစ်ဖော်ထုတ်ပေါင် POUNDS ။ ကြှနျုပျတို့သညျဤအဆင့်တွင်တာဝန်ရှိသူများတွေ့ဆုံမေးမြန်း ...
သမ္မတနိုင်ငံ၏ 96 ခေတ်ကိုကာဒိုက်မြို့၌စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူကျင်းပမည်
Hatt inbred စီးပွားရေးလေလံရလဒ်နှင့်အတူ Piling ဒေသတွင်း၌ Sirkeci-Uzunköprüအပြတ်အသတ်
Bursa - Yenisehir မြန်နှုန်းရထားအခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေး T3 - နုကမ်းလှမ်းမှုကို၏ T4 ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကတော့အပြတ်အသတ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးထံမှကောက်ယူခဲ့သည်
Bursa - Yenisehir မြန်နှုန်းရထားအခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေး T3 - မြေပြိုမှုတင်ဒါ၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး T4 အကြားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရလဒ်
တူရကီ - အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအဆင့်216 ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း - 17-စီမံကိန်းများအကြားလျှောစောက်အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောမြေပြိုမှု၏ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလေ့လာမှု, အင်ဂျင်နီယာန်ဆောင်မှုကန်ထရိုက်ကုမ္ပဏီတင်ဒါအနိုင်ရနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Turkoglu ကီလိုမီတာ Cross-Köprüağzဘူတာ Sevindik + အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဖော်ဆောင်ရေးလမ်း 49 မီတာ Peronbej နှင့် Stop ၏ညာဘက်ဘေးထွက် Stop 600 100 ၌တွေ့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးYaptırılacaktır (လက်ဝါးကပ်တိုင်မိုင်အကွာအဝေး၏Karaisalıbucag-Stop စခန်းများ: + 319 647 319-759 အဆိုပါဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအမှတ် 35 အပေါ် +)
သတို့သမီးလတ်တလောလေ့လာမှုများခဲ့သည့် Korkuteli-ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ် Way ကို ''
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: အ 25 1904 အောက်တိုဘာလ Anatolia ဘဂ္ဂဒက်မီးရထားခုနှစ်တွင် ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: အောက်တိုဘာလ 24 1922 မဟာထိုးစစ်စတင် ...
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (540) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (861) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
တတိယသုံးလပတ်အတွင်း Groupe Renault မှ 11.3 ဘီလီယံယူရိုငွေကြေးလည်ပတ်မှု
ZES လျှပ်စစ်အားသွင်းစက်များသည် 100 သို့ရောက်ရှိသည်
Bursa Nilüfer၌ Baja စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆက်ဖြစ်နေသည်
Mitsubishi Motors သည်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားတိုးချဲ့ရန်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်ပီယံဂရိ, ဥရောပ3အတွက်နှေးကွေးခဲ့ပါဘူး။ ရှိခဲ့